Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် (F.U.A.)
at 12/10/2013 03:36:00 AM
( By-Ven Ravika)
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် (Federal Union Army) ကို ထူထောင်ဖို့ ၂၀၁၀-ခုနှစ်၊ CEFU အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကတည်းက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြဟန် ရှိတယ်။ အစိုးရက ဒီအကြံကို ရိပ်မိလို့ (၁) နိုင်ငံတကာသံတမန်ရေးမှာ အစိုးရလည်း မျက်နှာပန်းလှစေ၊ (၂) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း ဟန့်တားနိုင်စေ ဆိုပြီး စီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့တယ်။
F.U.A. ကို အပြတ်ထောက်ခံတဲ့ ကချင်၊ ရှမ်းမြောက်၊ ပလောင်၊ မွန်၊ ပအိုဝ်း၊ ကရင်နီတို့ထဲက အင်အားအကောင်းဆုံး ကချင်ကို ဖြိုဖို့ အစိုးရက သန္နိဋ္ဌာန်ချခဲ့တယ်။ တရုတ်အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့နေရာကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့လည်း အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ စစ်ပွဲ ဖြစ်တယ်။